गण्डकी प्रदेशमा विपक्षीको सरकार बन्ला वा भंगै हुनेछ प्रदेश सभा ?
२७ जेठ, काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ला वा प्रदेशसभा भंग होला ? भन्ने विषयहरुमा अनुमानहरु बढाइएका छन् ।
ठूलो दलको नेताको हैसियतमा २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गुरुङले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेर पदमुक्त भएसँगै यस्ता अनुमानहरु बढेका हुन् ।
बिहिबारको प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन गुरुङले प्रस्ताव पेस गरेका थिए तर उनको पक्षमा २७ मत मात्र आएको थियो । उक्त मत नेकपा(एमाले) को मात्र थियो । यसअघिसम्म सर्वोच्चले बहाली गराएका जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाको मत गुरुङलाई पर्ने बताएपनि अन्तिममा उनि तटस्थ बसेका थिए ।
विपक्षमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका ३० सांसदले मत दिएका थिए ।
सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा २७ मत, विपक्षमा ३० मत, १ जना सांसद मतदानमा सहभागी नभएको जानकारी दिँदै विश्वासका लागि मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ३१ मतको आवस्यक पर्नेमा ५८ जना सांसद उपस्थित भएकोमा ५७ जनाले मतदान गरेका थिए । युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) भने प्रदेशसभा बैठकमै उपस्थित नभएकाले मतदान प्रक्रियामा पनि सहभागिता जनाएका थिएनन् ।
यसअघि २ वैशाखमा विपक्षी गठबन्धनले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मतदान हुने एक दिनअघि नै मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिइ प्रदेश सभामा ठूलो दलको नेताको हैसियतले गुरुङले वैशाख २९ मा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैको लागि उनले २५ जेठमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।
अब संविधानको धारा १६८(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधारमा प्रस्तुत गर्न प्रदेशसभाका कुनै पनि सदस्यलाई आह्वान गर्नेछिन् ।
कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपाको विपक्षी गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीलाई भावी मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सारेका छन् । विपक्षी गठबन्धनलाई पनि बहुमत जुटाउन बलियै कसरत गर्नुपर्नेछ । विपक्षी गठबन्धनमा अहिले देखिएकोमा भन्दा १ मत भए पुग्छ । हुनत विपक्षीसँग काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, जसपाका २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसद गरी कुल ३२ सांसद छन् । त्यसमध्ये एक जना सभामुख हुन् । सभामुखबाहेक पनि बहुमत पुग्ने अवस्था छ तर जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा खुलेका छैनन् । मुख्यमन्त्रीलाई नै समर्थन दिने कुरामा उनी तटस्थ बसेसँगै अब उनको भूमिका के हुन्छ भन्ने आशंका जन्माएको छ । त्यसो त स्वतन्त्र सांसद रहेका दीपक मनाङेले साथ दिए पनि विपक्षीको बहुमत पुग्ने छ । अंकगणितीय रुपमा अहिलेको अवस्था हेर्दा विपक्षीको सरकार बन्न प्रबल सम्भावना देखिन्छ ।
यदि धारा १६८(५) अनुसार विपक्षीले पनि मुख्यमन्त्री दिन सकेन भने संविधानको धारा १६८ (७) अनुसार प्रदेशसभा भंग हुनेछ र गण्डकी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा हुनेछ ।